कफुचे हिमतालसम्म पदयात्रा मार्ग सञ्‍चालन | Jukson
कफुचे हिमतालसम्म पदयात्रा मार्ग सञ्‍चालन
पोखरा: अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत कास्कीको पार्चे गाविसमा हिउँ पग्लिएर बनेको नयाँ कफुचे हिमतालसम्मको पदयात्रा मार्ग सञ्चालनमा आएको छ।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पदयात्रामार्गको हुंगुमा होटेलसमेत सञ्चालनमा आएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी प्रकाश गुरुङले बताए। पदयात्रा मार्ग सञ्चालनका लागि गोठाला हिँड्ने बाटो मर्मत सम्भार गरिएको छ।
समुद्री सतहदेखि दुई हजार चार सय ३७ मिटर उचाइमा उक्त हिमताल पर्छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण १२ वर्षको अवधिमा ग्लेसियर पग्लिएर उक्त हिमताल बनेको हो। नयाँ हिमताल भएकोले अध्ययन अनुसन्धान र पदयात्राका लागि यो मार्ग नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का पर्यटन अधिकृत नरेन्द्र लामाले बताए।
बाटो थप राम्रो बनाउन प्रस्तवित बजेट स्वीकृत भएपछि यसै वर्षमा पदयात्रा मार्ग स्तरोन्नति गरिने उनले जानकारी दिए। लालीगुराँसको वन हुँदै उकाली ओराली गर्दै अन्नपूर्ण, लमजुङलगायतका सुन्दर हिमशृंखलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने यो क्षेत्र बन्यजन्तु र जडीबुटीका लागि पनि प्रसिद्ध रहेको उनले बताए।
तालसम्मको पदयात्रा क्षेत्र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले पर्यटक आफैंले खानेकुराको जोहो गर्दै टेन्टमा बस्ने गरी फाटफुट पदयात्रामा जाने गर्थे। व्यावसायिक रूपमा होटेल सञ्चालनमा आउने भएपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्ने लामाले सुनाए । अहिलेसम्म सिक्लेससम्ममात्र पर्यटक पुग्ने गरेका थिए।
पदयात्रा क्षेत्रमा १५ जनासम्म बस्न सक्ने होटेल र चारवटा टेन्टसमेतको व्यवस्था गरिएको स्थानीय व्यवसायी गुरुङले बताए । पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई स्थानीय वनमा पाइने सागपात, सिस्नो, च्याउ, ढिँडो, भातलगायतका खाना खुवाएर सेवा दिने उनले सुनाए।
अन्नपूर्ण हिमालबाट झर्ने हिमको थुप्रो पग्लिएर बनेको हिमतालको संरक्षणमा राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने संरक्षण क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागिरहेका संरक्षणविद् डा. हुम गुरुङले बताए। नेपालमा ४५ सय मिटरमाथि मात्रै हिमताल भेटिएकोमा दुई हजार चार सय ३७ मिटरमै बनेको कफुचे ताल नेपालकै कम उचाइमा रहेको हिमताल भएको दाबी उनले गरे।
यो हिमताल अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्मीका लागि पनि रुचिको विषय हुन सक्ने बताउँदै उनले संरक्षण र पर्यटन विकास सँगसँगै लग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोरियाको नयाँ गाउँ अभियान
पोखरामा आज देखि राष्ट्रिय औद्योगिक ब्यापार मेला
किन ‘वार रुम’ बनाउँदैछ गण्डकी सरकार ?
मेरो राजीनामाबाट कहाँकहाँ खुसीयाली छायो ? : प्रधानमन्त्री
प्रशासनले एउटै सिफ्टमा दुई वा सोभन्दा बढी क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापकमाथि निगरानी थालेसँगै सामुदायिक र निजी क्याम्पसका प्राध्यापकहरुले राजीनामा दिन थाले !!!